2021 IWCA နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ (အောက်တိုဘာ ၂၀-၂၃) - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းစင်တာများအသင်း
၂၀၂၁ IWCA နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံ (အောက်တိုဘာ ၂၀-၂၃)
CCCC @ 2021 IWCA ပူးပေါင်း
ချိတ်ဆက်ပါ တိုက်ရိုက်အစည်းအဝေးဝက်ဘ်ဆိုက် နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်အစည်းအဝေးသတင်းအချက်အလက်များအတွက် ညီလာခံအစီအစဉ်ကိုကြည့်ပါ ထပ်မံ၍ အတူတကွအပြင် - ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ထပ်မံ၍ အတူတကွအပြင် - ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းစင်တာအသင်း ၀ င်များသည်တိုက်ကြီးများနှင့်သမုဒ္ဒရာများရှိနိုင်ငံများမှလာကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမတူကွဲပြားမှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်း၏အားသာချက်တစ်ခုအဖြစ်တန်ဖိုးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့်မျှဝေသောအရာများ၊ Etienne နှင့် Beverly Wenger-Trayner (၂၀၁၅) တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အတူတကွပေါင်းစည်းခြင်းခံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသင်း ၀ င်ခြင်းက“ ဒိုမိန်းအပေါ်ကတိက ၀ တ်ပြုခြင်းနှင့်…အခြားသူများနှင့်ကွဲပြားသောကွဲပြားသောအရည်အချင်းများ” ကိုဆိုလိုသည် (E. & B. Wenger-Trayner, 2015) ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အသင်းအဖွဲ့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားတစ်ခုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေစဉ်အလေ့အကျင့်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု၏တန်ဖိုးများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုညှိနှိုင်း။ အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်တခါတရံတွင်ရှုပ်ထွေးစေသောအလေ့အကျင့်အသိုင်းအဝိုင်းများစွာ၌ကျွန်ုပ်တို့လည်းပါ ၀ င်သည် (Wengner- Trayner, 2015) ။ သို့သျောလညျး, ငါတို့တစ် ဦး ချင်းတည်နေရာ၏ထူးခြားမှုသည်သင်ယူနှင့်ကြီးထွားရန်အနေဖြင့်အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝသောထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဤစာအရေးအသားစင်တာ၏အလေ့အကျင့်အသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်သာမကကျွန်ုပ်တို့၏အခြားသောအလေ့အကျင့်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်နှင့်အနေအထားအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းကိုအာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောရပ်ရွာများ၊ မြို့ကြီးများနှင့်နိုင်ငံများတွင်ဒေသခံများ၊ ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နှင့်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာလူမှု - သမိုင်းအခင်းအကျင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးချင်းအဖွဲ့အစည်းများမှလက်ရှိထုတ်ဝေမှုများနှင့်ကွန်ဖရင့်များအားအကျဉ်းချုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်ယခုနှစ်တွင်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြသောကျူတာများ၊ ဆရာများ၊ ကျောင်းသားများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများစိန်ခေါ်မှုများကိုဖော်ပြသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကပ်ရောဂါဟာငါတို့အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းရှိအုပ်စုများကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သမိုင်းကြောင်းနှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဘေးဖယ်ဖယ်ချန်ထားခြင်းနှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဤအကြမ်းဖက်မှု / နှုတ်ဆိတ်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုနေရာအနှံ့အပြား၌ပိုမိုသတိပြုမိလာစေသည်။ အောက်တိုဘာလတွင်ပြုလုပ်သောယခုနှစ်ပြုလုပ်သောစုရုံးပွဲ၌ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးအသားစင်တာအသိုင်းအဝိုင်းရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများဖြစ်သောဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဟောင်ကောင်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဒီမိုကရေစီအပေါ်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်မှုများ၊ အမုန်းတရားနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများတိုးပွားလာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏နာတာရှည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တုန့်ပြန်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်များကိုမည်သို့ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်ကိုဆန်းစစ်ပါ။
ဒီပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတောင်နှင့်မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိကနှင့်အာရှတို့မှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အသင်းဝင်များမှတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အုပ်စုများကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ အားလုံး ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်တာများသို့သွားရောက်သူစာရေးဆရာများနှင့် အားလုံး သူတို့ကိုအလုပ်လုပ်သောသူ။ ဤကြိုးပမ်းမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာအရေးအသားစင်တာနှင့်သက်ဆိုင်သောနည်းလမ်းများအားအခြေခံထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်ဒေသတွင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်သက်ဆိုင်မှုအပေါ်သစ္စာရှိမှုနှင့်ထပ်တူကျခြင်းမှရရှိသောထူးခြားသည့်အမြင်များကိုထင်ဟပ်စေပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းကကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးများကိုပြန်လည်အတည်ပြုရန်နှင့်ပြန်လည်တွက်ချက်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့မည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုပြောနေခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံအဆင်မပြေနိုင်သောနေရာတွင်ရှုပ်ထွေးနေစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိအခြေအနေများကိုမည်သို့တုံ့ပြန်မည်၊ မည်သို့တုံ့ပြန်မည်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်တောင်းဆိုသည်။
ငါတို့အများစုသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမိသားစုများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းများ မှလွဲ၍ ကာယပိုင်းအရအကုန်အကျခံခဲ့ကြရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လည်းစုဝေးခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့အတူတကွဖြစ်ဖို့အခြားနည်းလမ်းတွေထွက်တွက်ဆအဖြစ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ kairotic အခိုက်အတန့်ကိုစာပေများ၊ ကွန်ဖရင့်များ၊ ရာထူးထုတ်ပြန်ချက်များ၊ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်တုန့်ပြန်မှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနနှင့်အစပျိုးမှုများ - ကျွန်ုပ်တို့အလွန်စိတ်ပျက်အားငယ်နေချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေါ်ပေါက်လာသည့်အချိန်များ - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤညီလာခံတွင်ဂုဏ်ပြုလိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစုဝေးရောက်ရှိလာသည့်တိုင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရကွဲလွဲမှုများရှိနေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုအားတက်ကြွ။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်တုံ့ပြန်မှုများကျင့်သုံးနေသောလူ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်မည်သို့ဆက်လက်တွေးတောနေသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်၊ စူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့်ဂုဏ်ပြုရန်ကြိုးစားသည်။
အဆိုပြုချက်များသည်အောက်ပါအကြောင်းအရာများမှ (သို့သော်ကန့်သတ်မထားပါ) မှုတ်သွင်းနိုင်သည်။
ဒီနှစ်မနှစ်ကမင်းရဲ့စင်တာကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့သလဲ၊ သင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့သလဲ။ မည်သည့်အလေ့အကျင့်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းမှသင်ပြသနာဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများနှင့်နည်းလမ်းများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သနည်း။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၏ဖြစ်ရပ်များသည်အရေးအသားစင်တာတွင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးသူတစ် ဦး အနေနှင့်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သနည်း။ သူတို့ဗဟိုကဘယ်သူလဲ။
လူမှုရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှု / ပါဝင်မှုဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုသင်၏စင်တာကဘယ်လိုညှိနှိုင်းသလဲ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၏ပစ္စည်းအခြေအနေများသည်ဤလုပ်ငန်းအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်ခဲ့သနည်း။ ဤလုပ်ငန်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဒေသတွင်း (သို့) ကမ္ဘာချီအဖြစ်အပျက်များတွင်အခြေခံပါသလား။
သင်၏အလေ့အကျင့်၏အခြေခံအုတ်မြစ်အရေးအသားစင်တာတန်ဖိုးများနှင့် / သို့မဟုတ်သဘောတရားနေဆဲ? သင်၏အခြေအနေတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်မှုများပြုလုပ်ရန်၎င်းတို့ကိုသင်မည်သို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခဲ့သနည်း။
အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်၊ ၀ န်ထမ်းသင်တန်းပေးခြင်း၊ သုတေသနအတွက်အခွင့်အလမ်းများ (သို့) ဒေသတစ်ဝှမ်းတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်အတွေးအခေါ်များအရလူမှုရေးအရဝေးကွာသွားခြင်းကိုမည်သည့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိပါသလဲ။
သင်၏ ၀ န်ထမ်းများ၊ ဆရာများ၊ ကျောင်းသားများနှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်မှုကိုမြှင့်တင်ထိန်းသိမ်းထားပြီးပြီလဲ။ ဖယ်ထုတ်ထားခံထားရသူများအတွက်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုသည်ဤဆက်သွယ်မှုများကိုမည်သို့ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သနည်း။
“ ပုံမှန်” သို့ပြန်သွားရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သည်နှင့်အမျှမည်သည့်အလေ့အကျင့်အသစ်များကိုသင်ထိန်းသိမ်းလိုသနည်း၊
၂၀၂၁ IWCA ညီလာခံကိုအောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်အပတ်မှာအွန်လိုင်းမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတင်ဆက်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးပါ ၀ င်မှာဖြစ်တယ်။ သင်တန်းသားများကိုအောက်ပါတင်ပြချက်များအမျိုးအစားတစ်ခုအဆိုပြုလိမ့်မည်
Panel ကိုတင်ပြခြင်း - သတ်သတ်မှတ်မှတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုသို့မဟုတ်မေးခွန်းတစ်ခုကို ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အထိတင်ဆက်ခြင်း ၃ မှ ၄ ခု။
တစ် ဦး ချင်းတင်ပြခြင်း - ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်တင်ဆက်မှု (ထိုအစီအစဉ်ကိုကုလားထိုင်မှစုစည်းထားခြင်း) ။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ - တက်ရောက်လာသူများကိုတက်ကြွစွာသင်ယူမှုတွင်ပါ ၀ င်စေခြင်း။
စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးမှု - ခေါင်းဆောင် (များ) မှ ၁၅ မိနစ်မိတ်ဆက်ပုံဆွဲပြီးနောက်တွင်တက်ရောက်သူများအကြားလွယ်ကူသောဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်သည်။
အထူးစိတ် ၀ င်စားမှုအုပ်စုများ - အလားတူအကျိုးစီးပွားများ၊ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများ၊
Presentation Ignite: ၁၅ စက္ကန့်လျှင် ၁၅ ခုစီပါသော ၅ မိနစ်စာတင်ဆက်မှု
ပိုစတာတင်ဆက်မှု - တင်ဆက်သူ (များ) သည်တက်ရောက်သူများနှင့်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန်ပိုစတာတစ်ခုဖန်တီးသည့်သုတေသန - မျှတသောစတိုင်တင်ဆက်မှု။
Works-in-Progress - ဆွေးနွေးပွဲများကိုခေတ္တမျှ (၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်အထိ) ဆွေးနွေးသည့်နေရာတွင်ကျင်းပသောစားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများတွင်စင်တာ၏သုတေသနစီမံကိန်းများအနက်မှတစ်ခုအားဆွေးနွေးပြီးပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက်များရရှိပါမည်။
Panel နှင့် Individual တင်ဆက်မှုများပါ ၀ င်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းယခုနှစ်တွင်မတူညီသောအစည်းအဝေးများအားတူညီစွာကိုယ်စားပြုမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပြုလွှာများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၄ ရက်မွန်းလွဲ ၁၁း၅၅ တွင် HST (သင် Hawai'i တွင်မရှိလျှင်လူများစွာသည်အချိန်အနည်းငယ်ရကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်) :)
ကွန်ဖရင့်အချက်အလက်နှင့် IWCA ဝက်ဘ်ဆိုက် (www.writingcenters.org) သို့ ဝင်ရောက်၍ အဖွဲ့ဝင်များ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ။https://www.iwcamembers.orgအဆိုပြုလွှာတင်ရန်။ ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များအတွက် Dr. Georganne Nordstrom (georgann@hawaii.edu) ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Wenger-Trayner, အီး & ခ (2015) ။ အလေ့အကျင့်အသိုင်းအဝိုင်းများမိတ်ဆက် - အယူအဆနှင့်ယင်း၏အသုံးပြုမှုအကျဉ်းချုပ်။ Wenger-Trayner.com.
ပုံနှိပ်ဖော်ရွေသောဗားရှင်းတစ်ခုအတွက်ကိုနှိပ်ပါ 2021 CFP: ထပ်မံအတူတကွအပြင်.